Olole dhir lagu talaalayo oo looga soo horjeedo Donald Trump! - BBC News Somali
Olole dhir lagu talaalayo oo looga soo horjeedo Donald Trump!
Lahaanshaha sawirka MARTIN BERNETTI
Image caption Geed
Koox dad ah oo ku sugan dalka New Zealand ayaa meel wanaagsan marinaya olole ka dhan ah siyaasadda deegaanka ee madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump, kaasi oo ay doonayaan in ay ku talaalaan geedo aad u badan oo dhigma xaalufka dunida ay wajahayso Trump dartii.
Dad gaaraya 120,000 ayaa illaa iyo hadda sameeyey balanqaadyo ay ku talaalayaan geedo adduunka oo dhan.
Kooxdan ayaa Trump ku eedeeyey siyaasadiisa ah in Maraykanka uusan dhimin qaaca hawada wasaqeeya, isaga oo ku dooday in ay taasi waxyeelo ku tahay horumarka dalkiisa iyo waliba shaqooyinka dadka Maraykanka ah.
Dadka qaarkood ayaa iyaga geedaha talaalay, qaarna waxa ay bixiyeen lacag geedo looga abuuro dalalka Madagascar, Haiti, Ethiopia, iyo Napal.
Madaxweyne Trump ayaa horey u sheegey in uu ka baxayo heshiiskii cimilada ee Paris , kaasi oo uu horey u saxiixay madaxweynihii isaga ka horeeyey ee Barack Obama.
"Waxaan la kulanay dad ku sugan meelaha cimilada adduunka ay aad u saameysay sida Bangladesh, Mongolia iyo dalal kale, waxaanan aad uga xumaanay sida Trump jaahil oga yahay waxa dhacaya" ayuu yiri Adrien Taylor oo wax ka asaasay mashruuca lagu magacaabo Trump Forest ama kaynta Trump.
Lahaanshaha sawirka SEAN GALLUP
Image caption Madaxweyne Trump waxa uu ka baxay heshiiskii cimilada ee Paris
Dadka ololaha wada ayaa sheegey in loo baahan doono 650 mega tonnes oo ah maadada hawada sifeysa ee CO2 (halbeegga hawada) marka la gaaro sannadka 2025-ta, taasi oo u dhiganta 100 bilyan oo geed, si ay magdhow ugu noqoto qasaaraha ka dhalanaya sharciga Trump.
"Waxaan rabnaa in aan beerno kaymo adduunka oo dhan ah si aan wax oga qabano qaaca uu Trump hawada ku siidaynayo, waxaa laga yaabaa in ay tahay fikrad layaab leh, balse waa wax la xaqiijin karo" ayuu yiri Dr Daniel Price oo isna ka mid ah asaasayaasha mashruucan.
Lahaanshaha sawirka TRUMP FORES
Image caption Hawlwadeenada ololaha Trump Forest
Inkasta oo ay dad badan mashruucan taageereen, haddane waxaa jira dad fariimo nacayb ah usoo dira hawlwadeenada ololahan, kuwaas oo taageersan siyaasadda cimilada ee Trump.
Mar wax laga weeydiiyey sababta ay mashruuca ugu doorteen magaca Trump Forest ayuu Dr. Price yiri "haddii uu rabo in uu yeesho kaymahan sida Trump Vodka iyo Trump Tower oo kale, waan soo dhaweyneynaa, qadka taleefoonka waa uu furanyahay, mudane madaxweyne haddii aad akhrineysid warkan".